युग पाठकको नयाँ पुस्तक ‘माङ्गेना: नेपाल मन्थन’ केही समयअघि प्रकाशित भएको छ। यसअघि ‘उर्गेनको घोडा’ उपन्यासबाट चर्चा कमाएका पाठकको यो पहिलो गैरआख्यानको किताब हो। यो पुस्तकका केही लेख मार्फत् उनले ‘नेपाल’ को परम्परागत अवधारणामाथि कडा आलोचना गरेका छन् र केही वैकल्पिक अवधारणा प्रस्ताव पनि गरेका छन्। यो किताबबारे रोहित खतिवडाले पाठकसँग कुराकानी गरेका छन्।
तपाईंले किताबको नाम ‘माङ्गेना’ राख्नु भएको छ। यो शब्दको अर्थ र किताबसँगको साइनो के हो?
लिम्बु भाषाको शब्द ‘माङ्गेना’को अर्थ शीर उठाउने सांस्कृतिक अनुष्ठान हो। कुनै कारणले कसैको शीर झुक्यो भने शीर उठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता लिम्बु सभ्यतामा छ। यो एउटा नियमित सांस्कृतिक अनुष्ठान पनि हो।
जहाँसम्म यो आवरण ठीक कि बेठीक भन्ने प्रश्न छ, यो कला के हो भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ। जब कुनै कलाकारले राष्ट्रिय झण्डालाई लिएर केही सिर्जना गर्न खोज्छ, उसले झण्डालाई जस्ताको तस्तै त बनाउँदैन। उसले यसमा केही परिवर्तन गर्छ र नयाँ अर्थ दिन खोज्छ। ‘माङ्गेना’को आवरणमा भएको चित्रबाट पनि यस्तै अर्थ दिन खोजिएको छ।
यो पुस्तकको सुरुमा रहेको ‘नेपाल: एक नक्सा एक अवधारणा’ भन्ने निकै लामो लेखमार्फत तपाईंले नेपाल निश्चित शासक वर्गको आन्तरिक उपनिवेश हो भन्ने प्रमाणित गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नुभएको छ। किन?
राणाशासन सकिँदासम्म मधेसका आदीवासीहरूलाई कृषि मजदुरका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ। पहाडबाट जाने जमिन्दार र पहाडमै बस्ने ‘एब्सेन्टी ल्याण्डलर्ड’ले त्यस किसिमको बचत उत्पादन सबै लगिदिए। मधेसको धेरै जमिनमा विर्तावालका रूपमा अनुपस्थित जमिन्दारको हक थियो। यसले गर्दा त्यहाँ पूँजी निर्माण हुनै सकेन। प्रायजसो सबै किसानलाई हातमुख जोर्न नै समस्या भइरहयो। मेहेनतको उसको कमाई सबै अर्काले लगिदिने भयो।
एक ठाउँमा इतिहासकार बाबुराम आचार्यले पृथ्वीनारायण शाह नेपाल उपत्यकाको सभ्यतासँग नतमस्तक थिए भनेका छन्। अर्को ठाउँमा उनले एकताको सुत्रमा बाँध्नका लागि ‘नेपाल’ भन्ने नाम र भक्तपुरको झण्डा अपनाए भनेर लेखेका छन्। यो विरोधाभाषी कुरा छ। अघिल्लो कुरा तथ्यले देखाएको तर पछिल्लो कुरा उनको राष्ट्रवादी व्याख्या हो। त्यसबेला इतिहासको व्याख्या गर्ने हाम्रो ढंग पुगिसकेको थिएन। उनले इतिहास लेखन सुरुवात गरेका हुन्। त्यसैले आचार्यको लेखनमा यो विरोधाभाष देखिन्छ।
नेपालमा विभिन्न ‘राष्ट्रहरू’को समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने छ। समाजशास्त्रको कोणबाट हेर्‍यौं भने विभिन्न समुदायहरू आफैंमा राष्ट्र हुन्। जस्तो कि लिम्बुवान आफैंमा एउटा ‘राष्ट्र’ हो, मधेशमा केही ‘राष्ट्र’हरू हुन सक्छन्। उनीहरूलाई हामीले एउटै राज्यको सीमानाभित्र अँटाएर जानु छ भने त्यसका समस्याहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। अनि मात्रै राज्य निर्माणको प्रकृया सफल हुने देखिन्छ।
तपाईंले अघि भन्नु भएको ‘आन्तरिक उपनिवेश’ अगाडि बढाउने मुख्य शक्ति राजसंस्था ढलिसकेको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ७, २०७४ ११:२५:५९